Fikradaha xisaabta ee lagu qiimeeyo Fasalka Koowaad waxaa ka mid ah:
Isticmaal qiimaha goobta si aad u sharaxdo dhammaan tirada u dhexeysa 10 iyo 100 marka laga hadlayo tobanaan iyo kuwa. Akhriso, qor oo matalo lambarada oo dhan illaa 120. Tiri, oo aan lahayn shay, horay iyo gadaal u dhig lambar kasta oo la siiyay illaa 120. Samee oo jajabiso tirooyinka illaa 12 adoo xoogga saaraya inaad toban sameysid. (Tusaale ahaan: waxaa la siiyay 3 baloog, 7 baloog oo dheeri ah ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo 10.) Ka bood tirinta tirooyinka 2s, 5s, iyo 10s.
Aqoonsadaan oo abuuraan qaabab; isticmaal xeerar si aad u sharaxdo qaababka. U adeegso isugeynta ama kalagoynta xaqiiqooyinka aasaasiga ah si aad u metesho xaalad dhibaato jirta oo la isticmaalayo xukun lambar. (Tusaale ahaan: 5 + 3 = 8 ayaa loo isticmaali karaa in lagu matalo xaalad 5 balloon oo casaan ah lagu daro 3 buufin oo buluug ah si loo sameeyo 8 isugeyn buufin.
Sharax astaamaha walxaha laba-iyo-saddex-geesoodka ah, sida saddexagalka, labajibbaaranaha, leydirooyinka, goobaabka, goos gooska, leylisyada, kooniska iyo dhinacyada. Sharax sifooyinka qaababka aasaasiga ah.